Waa maxay sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Shabakadda Saadaasha Hawada
Waa maxay sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada?
Jarmal Portillo | 17/05/2022 10:00 | Geology
Granada waa gobol ay marar badan ka dhacaan dhulgariirro badan. Inkasta oo aanay ahayn dhulgariir aad u sarreeya oo khatar ah, haddana waa kuwo soo noqnoqda. Waxaas oo dhan waxay ka dhigan tahay in saynisyahannadu ay tahay inay wax badan ka bartaan qaybtan jasiiradda Iberian iyo cawaaqibka suurtagalka ah ee dhulgariirrada badan. dad badan baa yaabban waa maxay sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada.
Sababtan awgeed, waxaan u hibeyn doonaa maqaalkan si aan si qoto dheer kuugu sheegno sababta dhulgariirrada badan ee Granada iyo cawaaqibka ay leeyihiin.
1 Waa maxay sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada?
2 Waa maxay raxan seismic ah
3 Dhulgariir ku dhacay khaladaad gaaban
4 Junta de Andalucia ayaa u diyaar garoobay inuu wajaho dhulgariir
5 Waa maxay sababta dhulgariirrada badan ee Granada ugu badan yihiin
Waa wax iska caadi ah in dhulku inyar gariiro oo ku celceliyo gudaha Granada Basin, oo ka mid ah meelaha khatarta ugu badan ee seismic ee jasiiradda. Dhulgariirrada oogada ayaa laga dareemay magaalooyinka Granada sida Atarfe, Santa Fe ama Vegas del Genil waxaa u sabab ah dhulgariir isdaba joog ah oo billowday horraantii Disembar oo dib loo howlgeliyay Janaayo.
Ana Crespo Blanc, oo ah borofisar cilmiga geodynamics ka dhiga jaamacadda Granada, ahna khabiir ku xeel dheer dhulgariirrada, ayaa sharraxday in baaxadda dhulgariirka uu la xiriiro dhererka cilladda, taas oo Granada waxay u jirtaa kaliya 20 ama 25 kiiloomitir, sidaas darteed uma badna in uu jiro khasaare dhulgariir xooggan sida kuwa ka dhici kara San Francisco (USA).
Sababta dhaqdhaqaaqa seismic ee hadda jira waa iskahorimaadka u dhexeeya taarikada tectonic Afrika iyo Iberian. "Waxaan joognaa xuduud saxan ah oo soconaysa 5 millimitir sannadkii, qallafsanaantuna waxay sababi kartaa in dhulgariirku soo noqnoqdo,” ayuu yidhi Crespo.
Waa maxay raxan seismic ah
Dhaqdhaqaaqa taarikada ah ee qunyar u socodka ah waxa uu dhalin karaa dhulgariir cabbirro kala duwan leh, oo loo yaqaan raxan seismic, meelaha u dhow.
Manuel Regueiro, oo ah madaxa Kuliyada Geology-ga, ayaa tilmaamay: "Nasinta xiisadda ka dhalata cilladaha, kuwaas oo ah dildilaaca dhagaxa, marka qofku dhaqaaqo wuxuu abuuraa silsilad, dhammaantoodna way dhaqaaqaan oo waxay keenaan qalad kasta." Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha, qoto dheer ee dhulgariirkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa ku dhawaad ​​eber, xooggiisuna wuxuu kordhiyey xaaladda feejignaanta bulshada sababtoo ah, dusha sare, muwaadiniintu waxay si fiican u fahmeen.
Haddii xudunta xudunta ay qoto dheer tahay, xitaa ka sii xoog badan tahay, mawjada ayaa daciifi doonta oo aan laga dareemin dusha sare. Xasuusnoow IGN in dhulgariirkii 2010 uu ka weynaa baaxadda hadda (6,2 ee cabirka Richter) laakiin, sababtoo ah way sii qoto dheertay, way yaraatay.
Natiijo ahaan, ilaa 40 dhul gariir ayaa saaka laga diiwaangeliyay Granada waxaana laga dareemay ilaa 6 gobol oo Andalus ah, 30 ka mid ah ayaa dhacay saddex saacadood gudahood. Cabirka ugu xooggan ayaa ahaa 4,3 iyo 4,2, iyadoo xuddunta xudunta u ah ay ku taal Santa Fe. Saamaynta dhulgariirka ka dib ayaa argagax ku riday dadka Granada, kuwaas oo inkasta oo ay la qabsadeen dhaqdhaqaaqyada seismic-ka, ay xalay ka tageen.
Dhulgariir ku dhacay khaladaad gaaban
"Dhulgariirku halkan waxa uu saaran yahay khad cilladeed oo gaaban," ayuu sharaxay, isaga oo raaciyay in dareenku uu sidoo kale ku xiran yahay goobta guriga. Meelaha dhagaxa leh, ifafaale waa ku yar yahay, iyo agagaarka Vega, halkaas oo Santa Fe ama Atarfe. waa la kordhiyey sababtoo ah dhulka hoostiisa maaha mid adag.
Qoto dheerkeedu wuxuu kaloo saameeyaa saamaynta dhulgariirrada. Heerkulka 3,1 digrii ee la diiwaan galiyay duhurnimadii Talaadada ayaa ka dhacay meel 5km kaliya u jirta: "Derisyadu waxay dareemeen inay caadi tahay oo ay aad uga badan tahay aaggaas."
Jesús Galindo, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga geodynamics ee Jaamacadda Granada, ayaa codsaday maalgelin dheeraad ah si ay awood ugu yeelato ururinta xogta lagama maarmaanka u ah in la saadaaliyo dhacdadan oo kale. "Waxaan haysanay qalabka, laakiin waxaan u baahanahay maalgelin," ayuu dib u xusuustay, markii ay xiisad ka dhalatay cilado dhowr iyo toban kiiloomitir ah oo ka dhacay Granada, taasoo keentay dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ah meelaha kale ee u dhow.
Sidan oo kale, wuxuu saadaaliyay in "in ay jiri doonaan taxane kale oo la mid ah mustaqbalka, sidii hore." Isku soo dhawaanshaha Eurasia iyo Afrika ayaa ka dhigaya gobolka Buuraha Betik, oo ay baddu qarisay 10 milyan oo sano ka hor, inta soo hadhay ayaa kor loo qaaday si dhulku u soo baxo. "Waxaa jira cillado badan oo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah oo ka jira gobolka Vega, kuwaas oo ah meelaha tamartu ay ku urursan tahay. Waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan dhulgariir baaxad weyn oo lagu daray ama laga jaray 5".
Sikastaba, "Dhismaha maanta aad bay uga wanaagsan yihiin sidii hore.. Waa dhismayaal iska caabiya. Goynta ama daboolka wejiga ayaa soo baxaya."
Junta de Andalucia ayaa u diyaar garoobay inuu wajaho dhulgariir
Elías Bendodo, Wasiirka Madaxtooyada, Maamulka Dadweynaha iyo Arrimaha Gudaha, ayaa Arbacadii sheegay in guddigu uu wado "kormeer joogto ah" oo ku saabsan qulqulka seismic ee saameeya Granada iyo aagga magaalo-madaxda ah, haddii ay lagama maarmaan noqoto. wejiga bilawga ah ee qorshaheeda kadiska ah ee khatarta seismic waxay hadda ku jirtaa marxaladda xaalad degdeg ah, sababtoo ah marka loo eego xogta khubarada, dhulgariirrada taxanaha ah waxay sii kordhin karaan waqti ka dib.
Intii lagu guda jiray booqashada Xarunta Isku-dubbaridka Degdegga ah ee 112 ee gobolka Granada, Bondodo wuxuu sidoo kale booqday Machadka Andalusian ee Geophysics iyo Kahortagga Masiibooyinka Seismic wuxuuna goob joog u ahaa gacantii ugu horreysay ee waxqabadyada taxanaha ah ee la xiriira dhulgariirkii ka dhacay gobolka Granada ee Vega.
Bondodo wuxuu sheegay inuu fahmay "cabsida guud iyo hubanti la'aanta" Granadans waqtiyadan oo kale, wuxuuna raaciyay "Andalus waxay diyaar u tahay inay wajahdo xaaladahan lama filaanka ah sababtoo ah waxaan haynaa adeegyo degdeg ah oo dalka ah, waxaa suurtogal ah in la dammaanad qaado amniga oo la farageliyo iyadoo la adeegsanayo hab-maamuus gaar ah mar kasta."
Waa maxay sababta dhulgariirrada badan ee Granada ugu badan yihiin
Aagga qallafsanaantu wuxuu ku fidsan yahay koonfur-bari ilaa badda Alberan, halkaas oo dhulgariir weyn uu ka dhacay 2016, oo in ka badan 20 qof ku dhaawacmeen Melilla. Marka xigta, sii wad Al Houcemas ee Morocco, kaas oo sidoo kale la kulmay dhulgariir masiibo ah 2004tii.
Qaar ka mid ah dhulgariirradii ugu muhiimsanaa ee laga diiwaan geliyey Jasiiradda Iberian ayaa ka dhacay meel u dhow Granada. Tani waxay ahayd kiiskii Arenas del Rey ee 1884, kaas oo dilay in ka badan 800 oo qof oo burburiyay kumanaan dhismo; Albolote, 1956, oo leh 11 dhimasho ah, ama Dúrcal, mid ka mid ah diiwaannada ugu awoodda badan ee abid laga diiwaan geliyo waddankeenna, Cabbirkiisu wuxuu ahaa 7.8, laakiin ma uusan geysan khasaare badan tan iyo markii ay ka dhacday qoto dheer 650 kiiloomitir.
Dhulgariiradan ka hor, sanadkii 1431, dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 6,7 ayaa ku dhuftay Granada, oo markaas boqortooyo Muslimiin ah ka talin jirtay, waxaana uu khasaare baaxad leh u geystay Alhambra. Dhulgariirkii Talaadadii oo cabirkiisu ahaa 4,5 ayaa ahaa kii ugu weynaa muddo 40 sano ah, waana inaad dib ugu noqotaa 1964kii si aad u hesho 4,7 kale oo cabirka Richter Scale.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Waa maxay sababta dhulgariirrada ugu badan ee Granada?
waa maxay meeriyaan